DF Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u furtay duulimaadyadii gudaha | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u furtay duulimaadyadii gudaha
DF Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u furtay duulimaadyadii gudaha
Muqdisho (Halqaran.com) – DF Soomaaliya ayaa Axadda maanta ah si rasmi ah u furtay duulimaadyada gudaha Soomaliya oo xirnaayeen bilihii la soi dhaafay, kadib saameyntii ka dhalatay Cudurka Coronavirus.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa halkaasi looga dhawaaqay duulimaadyada gudaha inay si toos ah u furan yihiin maanta kadib, iyadoo la tixraacayo tilmaamaha Covid-19 loo baahan yahay dadka inay raacaan.
Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha Hay’adda duulista rayidka, ayaa sheegay inay u diyarsan yihiin howsha adag ee hortaala maadaama wali uu jiro halista cudurka Covid-19.
Golaha Wasiirada Xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shirkii golaha ee Khamiislaha ah ku ansixiyay in dib loo furo duulimaadyada gudaha dalka oo hore loogu hakiyay si loo yareeyo faafitaanka cudurka Covid-19.
DF Soomaaliya ayaa 29 bisha Maarso ee sanadkaan 2020 hakisay sabab la xariiira cudurka safmarka ah ee Coronavirus.
Duulimaadyadii gudaha oo dib loo furay